Okunye ukungaqondi mayelana nenqubo ye-MBR Process news-Industry news-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd
Okunye ukungaqondi kahle ngenqubo ye-MBR ②
Isikhathi: 2020-07-10 Hits: 138
Lo mbhalo uzoqhubeka nokwethula ekungaqondisisini ngokusetshenziswa kwenqubo ye-MBR ekwelashweni kwamanzi angcolile.
Ukungaqondi kahle 2: Uma i-MBR isetshenzisiwe, ikhwalithi yokungcola ingaqinisekiswa.
Ukuhumusha okulungile: Inqubo ye-MBR empeleni iyinhlanganisela yendlela yokusebenza ye-sludge ne-membrane filtration. Kususelwa kunqubo yendabuko eyenziwe yasebenza futhi ithatha indawo yethangi lokuhlala lesibili ngokuhlunga ulwelwesi.
Ngalobu buchwepheshe, bungaletha izinzuzo zomphumela omuhle wokunqanda kanye nokuhlushwa okuphezulu kwe-sludge. Kepha lokhu akusho ukuthi uma inqubo ye-MBR isetshenzisiwe, yonke indle ingalashwa.
Ngokususwa kokungcola, ukuhlunga ulwelwesi kunomphumela osobala kakhulu ku-SS, ngenkathi ukususwa kwezinto eziphilayo kusencike ekushayweni kwemvelo yethaka elicushiwe kanye nezinto eziphilayo.
Okwamapayipi endle ane-biodegradability empofu, ubuchwepheshe be-MBR bunomthelela okhawulelwe. Kumanzi angcolile aselashwe ngokuphelele ngokwenziwa kwamakhemikhali ngaphambili, iqhaza lobuchwepheshe be-MBR nalo lilinganiselwe.
Okwedlule: Okunye ukungaqondi kahle ngenqubo ye-MBR ③
Okulandelayo: Ukungaqondi okuthile mayelana nenqubo ye-MBR